Wathengela isilwane - budgerigar. Beautiful, elincane, ikhuluma futhi bejabule inyoni - lena umbono wokuqala abantu abonile bale zilwane. Kodwa akubona bonke ngesikhathi esisodwa cabanga ngezidingo zabo zemvelo: bahlalaphi efulethini, kangaki udinga ukuhlanza yezinyoni, futhi ekugcineni, yini ukondla budgies. Nokho, amaphuzu ezimbili zokuqala, ungaphendula igama - ukuphila yezinyoni, ehlanzekile okungenani kanye ngesonto. Kodwa ukusuthisa ... Lo mbuzo kungaba ngisho kudingekile ukunikeza impendulo eningiliziwe. Ngakho, cabanga kwengqikithi ethi "Ukondla budgies".
Izinyoni le zinhlobo omnivores, kodwa lokho akusho ukuthi ungakwazi ukuwondla ukudla. Okokuqala, sihlaziya ukubunjwa isimangaliso Ukudla mihlobiso Izimpaphe.
Ukuze uqinisekise upholi yakho ukuze ube nempilo, kubalulekile ukuze ondle futhi ukudla eyomile futhi izithelo, ngaphandle kokunciphisa ukubaluleka ingxenye ngayinye.
Ake uqale nge ukudla eyomile. Ngo isilwane ezitolo ku umbuzo yini ukondla budgies, yimuphi umdayisi impendulo categorical: "ukondla" - bese ukhomba eshalofini laden nabo. Umbuzo olandelayo: "Kuyini izinga ukudla?" Futhi lokhu yilapho kudingeka afune hhayi kuphela usuku lokuphelelwa yisikhathi, kodwa futhi kwikhava yawo. Kumele uphawu ku-polyethylene ne-uphawu, isb avikelwe ethonyeni izici zangaphandle: umswakama, izinambuzane. Ibhokisi kungcono hhayi ukuthatha, futhi Angazi ukweluleka ukushintsha umakhi. Ukwakheka okuphakelayo kumele kube njalo. Ukukhuluma lakamuva. Zinike isikhathi ukubaqondisa ingxenye iphakheji nto "Ukwakheka". Ukudla ezomile akufanele kube izithelo! Ngisho noma kusekusha eshalofini yokuphila, bangase babe baningi, izinyanga eziningi.
Okuphakelayo uthenge, futhi kungakanani kufanele kube ekudleni budgerigar? Izinga - 70% ekudleni nsuku zonke izinyoni. A upholi e amagremu kumele inikezwe mayelana ezimbili amathisipuni ukudla eyomile ngosuku. Ezinye izindaba zika-kudla kwetilwane up amajikijolo, izithelo kanye nemifino. Lapha sesifike nefolishi amnandi.
Njengoba wazi, akhawunti amnandi ukudla 30% ekudleni eziyisisekelo wezinyoni. Kuyinto imifino, izithelo kanye amajikijolo. Abaningi bezwa impendulo yombuzo othi lokho ukondla budgies ukuthi bavunyelwe ukudla esingokwemvelo ngokushesha ababaze into efana: ". Yebo Manje nje ubaleka emakethe" Kodwa Ngithemba uyaqonda ukuthi izithelo enezimpiko kumele inikezwe fresh kuphela, futhi ngisho nangalesosikhathi akubona bonke. Ningamniki budgies ezinye izinhlobo zawo ezishisayo, efana Persimmon, umango, sasigaya upopo kanye ukwatapheya. Kuvunyelwe ukondla izithelo like amabhilikosi, amagonandoda, ubhanana, ama-orentji.
Endaweni ehlukile, futhi bethi esiphikisayo amantongomane kanye imbewu, ukudala ukungezwani isibindi wezinyoni. Manje ku amajikijolo.
Amajikijolo zopholi anikeze noma iluphi, kodwa babengesibo ezidliwayo. Lokhu iplamu, amagilebhisi, ama cherry, ama-raspberry, namahalananda, ama-strawberry, currants kanye ulwandle lalesi sihlahla.
Imifino budgies nazo ngokukhetha. Ngaye, kukhona umgoqo ngalokhu okulandelayo: isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, imifino okubabayo, Sorrel, amazambane, u-anyanisi nesweli. Kungenzeka ukunikeza imikhiqizo Lokudabuka yemifino ezifana iklabishi, izaqathe, utamatisi, sweet pepper, ulethisi, ithanga, ukhukhamba, beet, squash, sweet corn, turnips nokuyimidumba.
Ngicabanga ukuthi kungaba engadingekile ukusho ukuthi ngaphambi zisebenzisa izinyoni izithelo nemifino kufanele kube esidlule wageza kahle futhi ukuyikhipha wabo bonke amathambo, uma ngabe zikhona.
Ngo umthombo obengeziwe amavithamini zinganikwa a mihlobiso zopholi amagatsha emithi nezithelo ezihlabayo, e-aspen, birch, hawthorn, Hickory, Maple kanye usika izingcezu azidingayo ngokucophelela. Kungcono ngiziqoqele ezindaweni kuqhathaniswa ehlanzekile - kude izitshalo, imigwaqo kanye nezinye izinto ezingcolisa umoya.
Akuvunyelwe ukuba awatshele amagatsha ngesihlahla, cherry, Lilac, ipheya, Poplar, oki kanye pine izihlahla.
Kanye ngesonto, Budgerigars anganika inkukhu abilisiwe noma izigwaca amaqanda (mayelana 5 amagremu ngamunye ngamunye), mealworms noma okunamafutha particulate izaqheqhe. Le mikhiqizo kuwumthombo wamaprotheni. Phakathi molting nokukhiqizwa inombolo yabo kumele kwenyuke.
Futhi, lezi zinyoni kudingeka calcium, okungaba umthombo wokulinganisa noma itshe amaminerali.
abanikazi abaningi zopholi ukukufaka ekudleni izilwane lokudlela, wasinikeza ukuba 2 amathisipuni ngosuku. Ukuze ekuwulungiseleleni ungasebenzisa eyodwa noma ngaphezulu kwanoma yimuphi wokudla. Kodwa wokudla nyoni idinga ngokucacile ukulungiselela kuyiwa kunobukaJohane amadoda. Ukulungisa iphalishi ngempela ewusizo isilwane sakho enezimpiko, landela imithetho embalwa:
Ngaphambi kokusebenzisa i-iqolo kumelwe sihlanzwe kahle.
Ungafaki wokudla isobho, ubisi, ushukela, usawoti kanye izinongo, ukupheka kuphela udinga amanzi.
Croup Ungase futhi hhayi ubilise, futhi steamed.
Ekuphenduleni umbuzo yini ukondla budgies, kufanele futhi kukhunjulwe ukuthi akuvunyelwe nhlobo inhlanzi, inyama, isinkwa, imikhiqizo yobisi (ngaphandle kungabukeki amafutha ongaphakeme cottage shizi), kanye nanoma yikuphi ukudla etafuleni lakho. Awukwazi ukwengeza ukudla lezi zinyoni izinongo, usawoti kanye noshukela.
Lena bonke ephelele Ukudla omdala budgerigar. Futhi uma uke wathola abanye abantu kwabobulili owanika yesizukulwane? Ngokushesha kuphakama umbuzo: "Yini ukuba ondle ingane inyoni budgerigar?" Futhi akayona okungenasisekelo, ngoba yokudla omdala sihluke kakhulu ekudleni abasha. Ngakho, amachwane ... Benzani badle?
Ngo ngemuva ukuchamisela ngezinsuku zokuqala, ukondla kangcono umama wabo, ngoba ngalesi sikhathi bedla ubisi goiter, kwakheka okuyinto e insikazi esiswini kwemisipha. Lapho abasha budgies abadadlana, kancane kancane uqale ebanikeza okusanhlamvu othambile. Futhi ukudla okunjalo - ubisi thymus kamama, kanye okusanhlamvu ekhululekile - kuyodingeka kuze amaphuphu baze ngokuqina futhi baqala ukundiza esidlekeni. Khona-ke bayofunda ukudla ukudla efanayo abadala.
Yilokho ohlobene amandla lezi zinyoni. Manje, ku umbuzo yini ukondla volnisth zopholi, nawe ungasabela ngokunembile futhi ngokuzethemba futhi sisebenzise ulwazi ekhona practice.
Umalusi Polish Podhale esifundeni: incazelo zohlobo
Indlela ukukhetha okusemathinini inja ukudla. Izibuyekezo ze-inja abalimi
Mastiff Tibetan dogs usayizi, incazelo zohlobo
I izidlaliso kangcono Husky
NeMpilo ezifuywayo Ivanov edolobheni. nomtholampilo wezilwane
Amabhodlela okuhlobisa - aesthetics impilo ekhishini
Ratmanova Island - esibalulekile ezindawo
Ingxabano izimo - Iyini? Ukuziphatha esimweni ukungqubuzana
Resort Good Naftalan (Azerbaijan). Ukwelashwa uwoyela naphthalan: Izibuyekezo
Waffle Maker "Gourmand": izibuyekezo zamakhasimende, izincazelo, ngebuhle nebubi
Ama-roller "Rollerbleyd" izingane nabesifazane: Izibuyekezo
Schantz collar izinsana
Ukufunda Ulwazi Izinhlobo zayo
Ukuhambelana Leo futhi Libra: ngazimbili isici
10 Amaqiniso mayelana umkhakha ifilimu, okuyinto kunzima ukukholelwa
Venice Airport. Marco Polo Airport. Venice Airport kumephu
Ithini inombolo saseBhabhiloni?